Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeShishini lokuhlangana » I-OTDYKH Expo eRashiya yimpumelelo yokuLungisa
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukwaphula iRussia News • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Indawo yokuZonwabisa ye-OTDYKH eRashiya
Uhlelo lwe-27 lwe-OTDYKH Leisure Fair eRashiya lufikelele esiphelweni, kwaye lube yimpumelelo enkulu. Ibaleke ukusuka ngo-Septemba 7 ukuya ku-9 e-Expocentre Fairgrounds eMoscow. Kulo nyaka iinkampani ezingama-450 ezimangalisayo zithathe inxaxheba, zivela kwiingingqi ezingama-41 zaseRussia nakumazwe ahlukeneyo angama-23.
Umboniso we-OTDYKH Leisure Fair ubonise iinkampani ezingama-450 ezivela kwimimandla engama-41 yaseRussia nakumazwe angama-23 ahlukeneyo.
Ngaphezulu kwe-6,000 yeendwendwe zorhwebo ezaziye buqu kumabala emidlalo, kwaye ngaphezulu kwama-3,000 abantu abathathe inxaxheba kwi-Intanethi.
Umboniso ububonisa imisitho yeshishini engama-30 enezithethi ezingaphezu kwe-160 kunye nabathathi-nxaxheba abaphantse babe li-1,500.
Amazwe athathe inxaxheba kwi-2021 OTDYKH expo yayi: Azerbaijan, Belarus, Brazil, Bulgaria, China, Cuba, Cyprus, Egypt, Germany, India, Iran, Italy, Japan, Jordan, Lithuania, Moldova, Peru, Spain, Sri Lanka, IThailand, iTunisia neVenezuela.
Kulo nyaka Indawo yokuZonwabisa ye-OTDYKH kubhiyozelwe abantu abatsha abatsha kulo msitho, kubandakanya ilizwe laseAzerbaijan, ummandla waseCeará eBrazil, isithili saseTottori eJapan kunye nenkampani, iSri Lankan Airlines.
Phakathi kwemimandla engama-41 yaseRussia emelwe ngokuziqhenya kumboniso, bekukho nabantu abafikayo abasele belindelwe. Le yayiyimimandla yeYugra, iKrasnoyarsk Territory, iTomsk, iChelyabinsk, imimandla yaseRostov neOmsk kunye neRiphabhlikhi yaseUdmurtia.
Ukuzimasa kulo mboniso kufikelele phantse kubantu abangama-10,000 6,000 ngokobuqu nangokuphantse. Ngaphezulu kwe-3,000 yeendwendwe zorhwebo ezize ngobuqu kulo mboniso ngelixa abantu abangaphezulu kwama-XNUMX belandela umboniso ngokusebenzisa amaqonga akwi-intanethi. Ngokuququzelela ezinye iindlela ezikwi-Intanethi, umboniso wakwazi ukwandisa umboniso kubathathi-nxaxheba abavela kwihlabathi liphela.
Kwakhona, i-OTDYKH Leisure Fair ibonakalise uluhlu olunomdla lwamaqabane, asekhaya nakwamanye amazwe. Umboniso wawuzingca ngokuziqhayisa nge-Egypt njengelizwe elingumlingani kulo nyaka ngokuma okumangalisayo kunye nabathunywa abaninzi. Ummandla weqabane yayinguNizhny Novgorod kwaye idolophu yamaqabane yayiyiSt. Amaqabane asemthethweni kulo msitho yayingummandla weAltai kunye neRiphabhlikhi yaseKhakassia. Iqabane lomqhubi osemthethweni lalingu-Academservice. Okokugqibela, iqabane ngokubanzi yayiyi-Sberbank, eyona bhanki inkulu eRashiya kunye nelinye lamaziko aphambili ezemali kwihlabathi liphela.
Ngaphandle kwezithintelo zangoku zokuhamba jikelele kunye nemida evaliweyo, umboniso wamanye amazwe uthathe inxaxheba kwihlabathi liphela. Ukubuyela okumangalisayo kulo mboniso, yayingelilo i-Egypt kuphela eli lizwe elingumboniso kulo mboniso, kodwa yathumela igqiza elikhulu kulo mboniso, likhokelwa nguMphathiswa oHloniphekileyo wezoKhenketho kunye nezinto zakudala zase-Egypt, uMnu Khaled al-Anany. Inqanaba eliphezulu lomdla wobungcali kulo msitho walo nyaka ubangelwe kukuphinda kuqale iinqwelomoya phakathi kweHurghada neSharm el-Sheikh kunye nezixeko ezingama-41 eRashiya.
Ukukhankanywa okhethekileyo kuya kwiZiko loKhuthazo loKhenketho eSri Lanka elinike isitokhwe esikhulu, esikhulu esineenkampani ezilishumi elinantathu zokubonisa. ISri Lanka ibonise igqiza elikhulu elalikhokelwe ngu-Mphathiswa Wezokhenketho kunye nezoPhapho, u-Hon. URanatunga Prasanna. Ukongeza koku, i-Sri Lankan Airlines yathatha inxaxheba okokuqala kwimbali ye-fair, kunye ne-bespoke stand yabo.
ILatin America yayimelwe kakuhle kumdlalo weholide ka-2021 OTDYKH; ICuba ibonakalise inguqu ebuyela kwifomathi yangaphambi kobhubhane yokubonisa ngeyona ndawo yayo ye-100m². Kumsitho wokuvula, usekela-mphathiswa wokuqala wezokhenketho eCuba, uMaria del Carmen Orellana Alvarado wathi iCuba isebenza nzima kakhulu ukuba yindawo ekhuselekileyo ye-COVID yabahambi kwaye ngokuthe ngcembe ilungiselela ukuvula imida yayo. Ngenxa yoko, ukusuka nge-15 kaNovemba 2021, ukuya phambili, iCuba izakucima uvavanyo lwe-COVID lwe-PCR olunyanzelekileyo kubakhenkethi, endaweni yoko kuvavanyo olungahleliwe luya kwenziwa xa ufika.
Nangona amazwe amaninzi asentshona Yurophu esenayo imida evaliweyo kunye nezithintelo zohambo, bekukho imeko esempilweni evela eYurophu. IBulgaria, iSpain, neCyprus zonke zazineendawo zazo zokudlala, ngelixa ezinye iziboniso zaziquka i-Itali, iJamani neLithuania.
Aba bantu sele bekhankanyiwe eAzerbaijan benze ifuthe ngokuma kwabo okumangalisayo kunye neenkampani ezili-18 ezithatha inxaxheba. Baye babamba iminyhadala eyahlukeneyo kwaye bazibandakanya kwiintlanganiso ze-B2b ezilungiselelwe kwangaphambili kunye nabakhokeli babakhenkethi baseRussia abakhokela kunye namajelo eendaba. Oku kukhokelele ekumiselweni ngempumelelo kwencoko evulekileyo phakathi kweRussia neAzerbaijan.
Zininzi izinto ezazibalasele kwi-2021 OTDKYH Leisure Fair, kubandakanya nezivumelwano ezininzi ezisemthethweni ezazityikityiwe. Idolophu yamaqabane iSt. Petersburg ityikitye izivumelwano ezintathu, esinye sazo ibisisivumelwano phakathi kweSt.
Omnye umzuzu obalulekileyo kulo mboniso yayikukutyikitywa kwesivumelwano phakathi kwamazwe onke sokwenza uhola wendlela waseRussia, iM-12. Imimandla emihlanu yaseRussia ityikitye isivumelwano: iMoscow, iRiphabhlikhi yaseTatarstan, ingingqi yaseVladimir, ingingqi yeNizhny Novgorod, kunye neRiphabhlikhi yaseChuvash.
Okokugqibela kodwa kungabikho nto incinci, iNkqubo yeShishini edume kakhulu ibiyimpumelelo enkulu, iqhayisa ngeminyhadala engama-30 ebizinyaswe zizithethi ezili-160 kunye nabathunywa abali-1,500. Amagqabantshintshi enkqubo yeshishini yaba siseshoni kwisicwangciso esilihloko esithi, Ikamva lezoKhenketho, iiNdlela zokuHamba. Esi siganeko sibonakalise ukuba yingxoxo evuselelayo phakathi kwabaphathiswa bezangaphandle bezokhenketho kunye nabameli beRostourism kunye ne-UNWTO.
Ukuqukumbela, kwakhona uhlelo lwamva nje lwe-OTDYKH Leisure Fair lube yimpumelelo emangalisayo kunye neenkampani ezingama-450 ezithatha inxaxheba kwimimandla engama-41 yaseRussia nakumazwe angama-23 ahlukeneyo. Umtsalane wawunabantu abaphantse babe li-10,000 bebonke, kokubini ngobuqu nakwi-intanethi.
Ikomiti ye-OTDYKH Expo idlulisa umbulelo kubo bonke abathathe inxaxheba kulo mboniso, kwaye bajonge phambili kumsitho wonyaka ozayo, njengoko beqhubeka nokophula umhlaba omtsha kushishino lokuhamba lwamazwe aphesheya.
Uqeqesho lwaBasebenzi boKhenketho lubalulekile kwi-post covid
I-Netherlands ibuyise izithintelo ze-COVID-19 phakathi kwezinto ezintsha ...
Imikhankaso yehotele yaseMelika yokugcwalisa imisebenzi evulekileyo eyi-100,000
I-American Airlines yokuCinywa kweNqwelomoya
ICayman Islands yazisa ngesiCwangciso sokuVulwa kwakhona kwi ...
UMphathiswa wezoKhenketho waseIndiya onika ithemba kushishino
I-Southwest Airlines ibhengeza iSekela lesiGqeba esitsha ...
Uvavanyo lweAir France i-IATA Pass Pass eMontreal-Paris ...